SUPERI SEPTEMBER Ari KUUYA- YAKANAKA Sarudzo NEMAHARA DZIDZO
Gunyana anomiririra mwaka wekukohwa, chirimwa chitsva chemadomasi chakakohwa, uye isu tave kuda kuunza super September. Isu tichapa zvakakurisa kuderedzwa kune vatsva nevakuru vatengi. Kugamuchirwa kuti utibate kuti uwane rumwe ruzivo! Teri / Whatsapp / Wechat: +86 158 3391 1611
Welcome to Our Canton Fair Living Kamuri
Panga paine vhiki kubva pakavhurwa 129th Canton Fair, uye zvinhu zvedu zvese zvakabatikana nekutepfenyura mhenyu. Ivo vese vakanaka uye nehunyanzvi kutengesa. Munhepfenyuro mhenyu, isu tichaunza ruzivo rwechigadzirwa zvakadzama. Kana iwe uri mupfupi wenguva, iwe unogona zvakare kuona iyo vhidhiyo kutsiva. W ...
2021 Gulfood muDubai
Takaenda kuGoodood 2021, tinogamuchirwa kutishanyira gore rinouya! Nguva: Kukadzi 21- 25, 2021 Kero: Dubai World Trade Center, PO Box 9292 Dubai, UAE
Nyanya nyanya Patinogadzira madomasi akapwanyika kuita kuravira kwakakora uye kufanana kwakadzikama, fomu iri rinozivikanwa samadomasi. Tinogona kushandisa iyi nyanya nyanya mune zvakasiyana siyana zvinonaka uye zvakasiyana mabikirwo zvakare. Izvi zvinopa kuravira chaiko nemagumbo, masobho, stews, poto yakagochwa etc. Tomato Ketchup Iyo essen ...
Hebei Tomato akarongedza zviitiko zvikuru kwazvo zvekuvaka zvegore kubva muna Nyamavhuvhu 9 kusvika 13, 2019. Kuti upfumise nguva yevashandi, kurerutsa kumanikidza kwebasa, kusimudzira kutaurirana nekutaurirana pakati pevashandi, simbisa kubatana kweboka uye simba repakati, uye kuronga unfo ...